Unikezelo lweMoto Moto E6 ityhilwe | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Uthotho lweMoto E6 kulindeleke ukuba lusungulwe njengendlalifa ye- Moto E5 ukusukela kunyaka ophelileyo. Uthotho lweMoto E lupakishwe ziimodeli zohlahlo-lwabiwo mali kwaye iMoto E6 ayizukukhetha.
Ukunikezelwa kweMoto E6 ngoku kwabelwane ngayo 91Mobiles, abathi banembono eyodwa kwezi. Masiyibone ngokulandelayo!
Ukunikezelwa komqolo wayo kubonisa ukuba ifowuni elandelayo ye-E-series ayiyi kuba nekhamera obuqhele ukwenziwa kwiimodeli zangaphambili kwiminyaka yakutshanje. Ikwabonisa ukuba isixhobo sinekhamera enye yangasemva ebekwe kwikona ephezulu ngasekunene, kunye nesibane se-LED esibekwe nje ngezantsi kwaso.
UMoto E6 unikezele ngokuvuza
Nangona isixhobo kulindeleke ukuba sibe nescreen somlinganiso we-18: 9, umphambili onikezelweyo kwisiphelo sendlela ubonisa oko ineebhele ezingqindilili ezijikeleze isikrini. Ezi zibonakala ngathi ziyatyeba kunezo zeMoto E5.
Isixhobo siphulukana nesenzwa yeminwe kwaye ijongeka ngathi iza noncedo lweplastiki olususekayo. Kuba akukho siciko setreyi yeSIM, iSIM khadi kunye namakhadi e-MicroSD aya kulayishwa kwiphaneli yangasemva kwaye ngenxa yoko ibhetri iya kususwa nayo.
Iselfowuni ikwabandakanya amaqhosha ayo evolumu kunye namaqhosha amandla kwicala lasekunene lesikrini, ngelixa kukho i-3.5mm i-headphone jack kumda ophezulu.
Ekugqibeleni, IMoto E6 kulindeleke ukuba ixhotyiswe yi-Snapdragon 430 SoC. I-chipset inokudityaniswa nge-2GB ye-RAM, ngelixa kuya kubakho ukhetho lwe-16GB kunye ne-32GB, zombini zinokwandiswa. Emva koko, iya kudlala isikrini se-5.45-intshi HD +, i-53 MP (f / 6) ikhamera ye-SK13L2.0 yangemva kunye ne-5 MP (f / 5) S9K5E2.0 ikhamera ye-selfie. Iya kukhutshwa nayo I-Android 9 Pie, nangona, okwangoku, akukho nto iyaziwayo malunga nokwaziswa kwayo kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ukucoca unikezelo lweMoto E6, iselfowuni elandelayo ye-Motorola eya kulwa kuluhlu olusezantsi